Manintona Bali " Journey-Assist - Ny tena mahaliana any Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Fampahalalana Bali
Mahaliana any Bali. zavatra hita
Tsangambato iray natsangana teo amin'ny tranokalan'ny Sari Club izany, izay rava vokatry ny fanafihan'ny mpampihorohoro tamin'ny 2002, izay nahatonga ny fahafatesan'ny olona 202, izay nisy vahiny maro. Mandraka ankehitriny, voninkazo no hita eto.
Azo atao mandritra ny famantaranandro ny fahatsiarovana; tsy voaloa ny saram-pidirana. Hita ao amin'ny Kut amin'ny làlan'ny làlan'i Jalan Legian.
Rano mihady rano
Tsy ny zaridainan'ny rano mahazatra izany. Ny Waterbom Park dia mandrakotra velaran-java-maitso ary misy zaridaina, dobo filomanosana, faritra fialamboly, toerana manintona isan-karazany ary slide-drano maro eny ivelany. Tsy ambany noho ny valan-javaboary tsara indrindra any amin'ny firenena eropeana Andrefana izy io. Etsy ankilany, mety eto ny vidiny - saika amin'ny ambaratonga eropeana. Noho izany, mba hiala sasatra miaraka amin'ny fianakaviana manontolo dia mila mandry tsy dia kely ianao.
Misokatra manomboka ny 9 ka hatramin'ny 18 andro isan-kerinandro ny valan-javaboary.
Misy karazana tapakila roa ampiasaina eto - iray andro sy roa andro. Ny tapakila iray andro ho an'ny ankizy latsaky ny 11 taona dia mitentina 315 Rs, ary ho an'ny ankizy mihoatra ny 000 taona ary ho an'ny olon-dehibe kosa dia 11 no vidiny. Azonao atao koa ny mividy fonosana manokana an'ny fianakaviana izay mora vidy kokoa noho ny mividy tapakila mitokana ho an'ny olona tsirairay ao amin'ny fianakaviana. Ny vidin'ny tapakila sy ny fonosana rehetra ankehitriny dia azo jerena ao amin'ny tranokalan'ny valan-javaboary: waterbom-bali.com
Waterbom Park dia hita any atsimon'i Kuta akaikin'ny trano fivarotana Discovery.
Tempolin'i Pura Masceti Petitenget
Iray amin'ireo tempoly Hindu lehibe indrindra any Bali. Izy io dia toerana ho an'ny fombafomba ara-pivavahana maro mahaliana ny mpizaha tany. Na izany aza, na dia tsy misy fombafomba aza dia toa tsara tarehy foana izy.
Misokatra isan'andro ny tempoly mandritra ny ora atoandro. Azonao atao ny mampiditra azy maimaimpoana. Ao amin'ny Kut any no misy ny tempoly, tsy lavitra ny morontsiraka Seminyak.
Tempolin'i Pura Ulu Watu
Iray amin'ireo tempoly Bali manintona indrindra any Bali ho an'ny mpizahatany izy io. Ny anton'izany dia mitoetra eo amin'ny toeran'ny Ulu Watu - miakatra amin'ny hantsana avo ambonin'ny morontsiraka izy io. Ity tempoly ity dia manan-danja lehibe amin'ny mpino Bali. Misy trano kely ara-pivavahana ao anatiny, izay fady tsy hiditra amin'ny olona izay tsy milaza tena ho Hindoisma. Na izany aza, mbola mahaliana ihany eto. Ampirisihina ho tonga ny hariva. Amin'ity tranga ity dia azonao atao ny mankafy ny filentehan'ny masoandro avy eo amin'ny tokotanin-tseranana akaiky, ary avy eo lasa mpijery ny fampisehoana choreografia nentim-paharazana, izay anaovan'ny mpandihy eo an-toerana ny dihy Kecak.
Ulu Watu dia mipetraka ao amin'ny saikinosy Bukit, izay ao amin'ny atsimo atsimon'i Bali. Tsy mandeha any aminy ny fitateram-bahoaka, ka afaka mandeha na taxi na bisikilety ihany ianao, na fiarakaretsaka. Betsaka avy amin'ny toerana mpizahatany malaza (indrindra, avy any Kuta) no atao eto.
Tempolin'i Pura Oolong Danu sy farihy an-tendrombohitra
Misy toerana any Bali izay misy farihy tendrombohitra 3 mifanakaiky. Bratan, Tamblingan ary Buyan no anaran'izy ireo. Ny roa farany dia eo amin'ny haavon'ny 1 m.
Misy toeram-pitsaboana eo akaiky eo. Misy kafe maromaro eo amboniny, izay ahitana ny farihy roa misokatra miaraka. Na dia eto amin'ity tranokala ity aza, ny mpizahantany dia afaka mahita mpitazona boa lehibe iray, sidina amboasy ary iguanas.
Ao amin'ny morontsiraky ny Farihin'i Bratan dia tempolin'i Oolong Danu Bratan tsara tarehy.
50 km miala an'i Denpasar no misy ity toerana ity. Misokatra ho an'ny besinimaro isan'andro ny tempoly manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 18 hariva. Ny saram-pidirana dia 30 000 ropia.
Tena ilaina ny mitondra palitao sy / na mpamaky rivotra miaraka aminao, satria izy io dia mangatsiaka be kokoa eto noho ny any amin'ireo toeram-pialofana Bali. Aleo tonga vao maraina na alohan'ny filentehan'ny masoandro - mandritra ireo fotoana ireo dia vitsy ny olona eto.
Ity tempoly ity dia mpandray an-tsoratra eo amin'ireo mari-pamantarana Bali rehetra amin'ny isan'ny karatra paositera misy ny sariny. Pura Ulun Danu Bratan ihany no afaka mifaninana aminy amin'ity lafiny ity.
Tanakh Lot dia toa mitsingevana ambonin'ny onja. Noho ny tsy fahazoana miditra toy izany dia manana ody manokana. Ity tempoly ity dia miorina amin'ny vatolampy ambany indrindra, izay tondra-drano amin'ny ampahany mandritra ny fisondrotan'ny ranomasina. Saingy, momba azy io no vaky ny onjan-dranomasina, ka miteraka ny vokatry ny "fipoahana rano" izay mahasarika ny mpizahatany.
Misokatra ho an'ny fitsidihana isan'andro ny tempoly hatramin'ny 7 ka hatramin'ny 19. Vidiny fidirana - 30 000 ropia.
Ao amin'ny tsenan-trondro Jimbaran no vidian'ny ankamaroan'ny hazan-dranomasina ho an'ny trano fisakafoanana trondro malaza izay hita ao amin'ny Jimbaran Beach sy trano fandraisam-bahiny Bali hafa. Na eo amin'ny toerana be mpizahatany be any Bali aza ity tranom-barotra ity dia mitazona ny tsirony sy ny fomban'izy ireo. Ny vahiny iray dia afaka miditra ao amin'ny rivo-piainana tsy hay hadinoina eto ary mahita eo amin'ny talantalana isan-karazany ny hazan-dranomasina, anisan'izany ny haizina. Azo atao koa ny mividy azy ireo miaraka amina faniriana lehibe, na izany aza ny tsena dia fahalalàna lehibe fa tsy ny rehetra no mpivarotra etsy sy eroa.
Jimbaran Bazaar dia misokatra amin'ny 6 ka hatramin'ny 12 isan'andro. Any amin'ny avaratry ny Ranomasin'i Jimbaran no misy azy. Tsy mandeha eto ny fitateram-bahoaka, ka fiara fitateram-bahoaka na taxi ihany no ajanona.
Tranom-bakoka somary lehibe io, izay ahitanao ny famoriam-bokin'ny zava-kanto kanto amin'ny vahoaka Pasifika (izany no antony niantsoana ny tranombakoka). Ity fanangonana ity dia misy sary hosodoko mihoatra ny 600 noforonin'ireo mpanakanto 200 mahery avy amin'ny firenena 25 izay an'ny faritry ny Pasifika. Ny hoso-doko maoderina dia mibahana ao amin'izy ireo, saingy afaka mampivelatra ny fahalalanao ny tantaran'ny Indonezia sy ny kolontsaina ihany koa ianao. Noho izany, dia atoro fatratra ny Tranombakoka Pasifika. Voalohany indrindra, mendrika ny hatao raha mahita ny tenanao ao amin'ny Nusa Dua (eto izy), raha avy any amin'ny toerana hafa eto amin'ny nosy dia sarotra ny ho tonga eto.
Io no faritra ao amin'ny Ubud, izay rakotra hazo lehibe, kirihitrala ary ala matevina matevina. Fa ny mahaliana azy aloha dia tsy ho an'ny zavamaniry, fa noho ny habetsaky ny makia monina eto, ary koa ho an'ny tempoly sy sary sokitra vato. Tsy matahotra ny olona ny gidro any an-toerana ary maka sary an-tsaina miaraka aminy. Na izany aza, voalaza fa tsara ny hanidy ny kitapo rehetra amin'ny zipper, ary tokony hatokana daholo ny zavatra rehetra (telefaona, solomaso, sns.)
Tranonkala: monkeyforestubud.com. Ny fidirana eto dia mitentina 20 rupe ary misokatra isan'andro manomboka amin'ny 000 ka hatramin'ny 8.30.
Ny haavon'ity volkano ity dia 1 m.Izy io no iray amin'ireo manintona ny nosy. Misy volkano iray hafa any Bali - Agung, avo kokoa aza. Na izany aza, malaza kokoa i Batur noho ny antony tsotra fa mora kokoa ny miakatra.
Misy safidy roa hizaha ity volkano ity. Safidy laharana 1 - tongava any amin'ny vohitr'i Kintamani, izay misy terrasse kely fandehanana. Tsy jerena ny volkano, ary koa ny farihy eo akaiky eo, antsoina koa hoe Batur. Ankoatra ny fandehanana an-tongotra dia azonao atao ny mitsidika ny cafe amin'ity terrasika ity, izay manome fomba fijery ihany koa. Noho izany, misy dikany ny drafitra, ohatra, ny sakafo hariva eto.
Safidy laharana faha-2 dia mety ho an'ireo izay maniry mafy ny hankafy ny tara-maraina avy any ambony ary mandehandeha amin'ny kaldera mahafinaritra indrindra amin'ny volkano. Noho izany dia mila miakatra any Batur fotsiny ianao.
Afaka mitsidika maimaimpoana ity toerana ity ianao. Azonao atao koa ny manakarama toro-lalana ary hikarakara fitsangatsanganana mpitari-dalana. Ny safidy farany dia mitentina 400 rupe ho an'ny vondrona mpizahatany hatramin'ny 000.
Amin'ny ankapobeny, saika ny riandrano Bali rehetra dia mendrika ny ho hitan'ny masonao manokana. Tsy toy ny, ohatra, ny ankamaroan'ny riandrano any Thailandy, any Bali dia lehibe sy lalina daholo izy ireo. Na izany aza dia misongadina indrindra i Sekumpul noho ny hahavony sy ny fomba fijeriny tsara tarehy. Raha ny marina dia riandrano lehibe roa samy hafa ireo, ary ny tsirairay amin'izany dia cascade misy kely.
Ny vidin'ny fitsidihana dia 10 ropia. 000 5 ropia ny fijanonana eo akaiky eo. Any amin'ny faritra avaratry ny nosy no misy ny riandrano. Tsy misy fitateram-bahoaka mankany, ka amin'ny alàlan'ny fitaterana hofan-trano ihany no ahafahanao mandeha.
Tirta Ganga dia lapan'ny rendrarendra izay fonenan'ny mpanjaka farany teo an-toerana, ary An Anung no anarany. Toerana be rano izy io, ao anatin'izany ny lalan-kely, loharano, sary sokitra demonia, dobo, lakandrano misy karipetra volamena mitsingevana ao.
Tirta Ganga dia afaka mifaly amin'ny olon-dehibe sy ny ankizy. Raha mijery ny lapan'ny olona ianao dia mety hieritreritra fa efa taloha be io. Amin'ny toerana sasany dia rakotry ny moss mihitsy aza izy. Na izany aza, raha ny tena izy, Tirta Ganga dia tsy antitra toa azy. Rehefa dinihina tokoa, ny Raja Bali farany dia nitondra hatramin'ny 1949, ary maty tamin'ny 1999 - izany hoe, tsy ela akory izay. Ny fanorenana no fialam-boliny. Nipetraka elaela tany Holland ilay mpitondra, ary nianatra tany amin'ny oniversite. Azo inoana fa ity firenena ity koa dia nanome aingam-panahy azy hanamboatra toha-drano izay misy ireo lakandrano sy tetezana rehetra ireo.
Misokatra isan'andro ny lapa manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 18 hariva. 8 km miala an'i Amlapura no misy azy. Ny saran'ny fidirana dia 35 000 rupees ho an'ny olon-dehibe ary 15 ropia ho an'ny ankizy. Indraindray ny bisy Perama dia mihazakazaka mankany Tirta Ganga, saingy tsy mitranga matetika izany. Ho fanampin'izay, ny tapakilan'ny bus dia tsy maintsy apetraka farafahakeliny iray andro mialoha ary 000 200 ropia ny vidiny. Noho izany, mora kokoa ny mankany raha amin'ny alàlan'ny fitateram-bola na taxi.
Ujung dia lapan'ny rano iray hafa naorina ho fonenan'ny fianakavian'ny mpanjaka. Gaga koa izy noho ny habetsahan'ny kamory, lakandrano ary sary sokitra, ary ny haben'ny faritany dia mihoatra ny Tirta Ganga efa ho 10 heny.
Ny elanelana misy eo amin'i Taman Ujung sy Tirta Ganga dia 10 km eo ho eo.
Misokatra isan'andro i Taman Ujung manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 19 hariva Ny vola lany amin'ny fitsidihana dia 20 000 ropia. Amin'ny alàlan'ny fitaterana sy taxi ihany no ahafahanao mankany.
Fasan'ny tendrombohitra Kawi
Tendrombohitra Kavi dia saro-pantarina misy fasana 10 izay voasokitra anaty vatolampy. Araka izany, dia miketrika tsy mahazatra loatra. Ny toerana misy azy io dia azo antsoina koa hoe hafahafa. Ireo fasana ireo dia hita amin'ny farihy lehibe. Raha hidina amin'izany ianao dia mila mandresy ireo dingana 371.
Ny faritany Jatiluvih dia tsy tanimbary mahazatra, fa tena asa kanto. Ireto misy fitetezana fitaratra izay any amin'ny havoanan'i Bali.
Misokatra isan'andro ny fidirana eto manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 17 hariva Ny vidin'ny fitsidihana dia 20 000 ropia. Tsy misy fitateram-bahoaka mankany Jatiluwih. Amin'ny alàlan'ny fitaterana nohofana na taxi ihany no ahafahanao mankany.
Izany no faratampony (mihoatra ny 40 m) ary ny riandrano feno indrindra ao amin'ny nosy Bali. Any amin'ny 10 km miala ny tanànan'i Singaraja no misy azy, any avaratry ny nosy. Betsaka ny fijerena sehatra no hita manakaiky an'i Gitgit, avy ao amin'ny fisokafan'ny toerana mahafinaritra iray. Sahy mandalo ny dingana 340 ianao, dia mety hidina eny amin'ny riandrano, izay ianao dia milomano.
Afaka tonga any Gitgit ianao amin'ny fitaterana manofa. Lavitra be amin'ity lavadrano ity ny làlan'ny fitateram-bahoaka.
Caves elefanta (Goa Gaja)
Tsy lavitra ny tanànan'i Ubud any Bali no misy lava-bato, izay tamin'ny taonjato faha-11 dia lasa mpitsoa-ponenana ho an'ireo moanina Hindu. Ireo moanina ireo dia nanapaka lava-bato tao anaty vatolampy ary nandrafitra ny fihinan'ny demonia, nandinika ny zava-drehetra manodidina. Ny efitrano ao anatiny dia misy endrika T. Misy endrika sokitra sy sarivongana andriamanitra hindoa Ganesha ao aminy. Ireo goa ireo dia tena malaza amin'ny mpizahatany, noho izany dia iretsaina ny ho tonga eto rehefa maraina, rehefa tsy dia vitsy ny olona eto. Afaka mahatsapa ny toe-tsaina fahagola izay miaina eto ianao. Eo akaikiny koa dia misy tempoly taloha maromaro.
Ny lava-bato elefanta dia eo amin'ny ala any akaikin'i Ubud no misy azy. Ary satria tsy lavitra an'i Ubud amin'ireo toeram-pialantsasatra malaza indrindra ary fitateram-bahoaka any Bali no tsy dia sarotra ny mankany Goa Gadj amin'ny fitateram-bahoaka. Ny bisy misy orinasa roa dia mankany Ubud - Perama sy Kura-Kura.
Ny fidirana ao amin'ny faritanin'i Goa Gadzha dia misokatra isan'andro manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 17. Ny tapakila ho an'ny olon-dehibe dia mitentina 15 000 ropia, ankizy - 7 500 ropia.
Tempolin'i Pura Tirta Empul
"Pura Tirta Empul" adika hoe "Tempolin'ny rano masina". Ity no iray amin'ireo tempoly Bali manan-danja indrindra, izay nipoitra teo amin'ny toerana misy loharano, ny fanasitranana izay efa fantatra tamin'ny taona 962. Ahitana tokontany maro izay misy dobo ny tempoly. Misy ny fombafomba amin'ny ablution, izay maneho tsy ny vatana fotsiny, fa ny fanadiovana ara-panahy koa. Ny loharano tsirairay ao amin'ny dobo dia samy manana ny anarany avy. Ary ny tsirairay amin'izy ireo dia omena karazana hery majika misaraka. Ohatra, amin'ny iray amin'izy ireo, ny rano dia afaka mamoaka fanahy ratsy, amin'ny iray hafa - manasitrana amin'ny aretina ary miaro amin'ny maso ratsy.
Azo atao ny mankany amin'ny tempolin'i Tirta Empul amin'ny alàlan'ny fitaterana hofan-trano ihany. Misokatra isan'andro ny fidirana manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 18 hariva. 15 rupees ho an'ny olon-dehibe ary 000 7 rupees ho an'ny ankizy.
Tempolin'i Pura Besakikh
Raha ny tena izy dia efitrano lehibe an'ny tempoly, izay ahitana olona 22 tahaka izany. Nilaza ilay angano fa naorina tamin'ny taonjato faha-11 ireo tempoliny ireo tamin'ny ezaka nataon'ireo fanjakana madinika izay nisy tamin'izany fotoana izany tao amin'ny nosy Bali. Misaotra an'io, tonga dia maro ny fananganana masina. Ny tsirairay amin'izy ireo dia samy avy amin'ny fanjakana iray manokana. Ary hatramin'izao, any amin'ny trano tokana tsirairay, ireo mponina amin'ny faritra Bali iray manokana dia mivavaka amin'andriamani-kafa.
Ny fidirana amin'ny sampana Besakih dia misokatra isan'andro amin'ny 8 ka hatramin'ny 17. Ny fitsangatsanganana miaraka amina tapakila 20 rupee.
Lempuyang Temple Pura
Ity tempoly ity dia hita eo amin'ny tendrombohitra iray eo afovoan'ny rahona. Rehefa tsara ny andro dia manome fomba fijery mahavariana momba ny volokano Agung izy, izay azo jerena amin'ny vavahadin'i Chandi Bentar. Mandritra izany fotoana izany, mbola vitsy ny mpizahatany eto, ka tsy misy hanelingelina ny fitsidihana ny toerana mahaliana toy izany.
Pura Lempuyang no misy ny tendrombohitra iray mitovy anarana, any atsinanan'i Bali, 75 km miala an'i Denpasar. Afaka mitondra any amin'ny alàlan'ny fiara fitaterana na taxi-be ihany ianao.
Iray amin'ireo valan-javaboary lehibe indrindra amin'ity karazana ity izy, tsy any Bali ihany fa manerana an'i Azia. Karazana biby maherin'ny 80 no mipetraka eto, ary ny biby tsirairay dia azo jerena ao amin'ny fonenany voajanahary. Ahitana biby avy any Indonezia, India ary ny kaontinanta afrikanina. Eto ianao dia afaka mahita sera deera, ony Himalayan, hippo afrikanina, rameva, zebra, voanjo, ostrika, liona, tigra indianina fotsy. Na eo amin'ny zaridainam-panjakana aza dia misy fampisehoana maro atao isan'andro isan'andro amin'ny fandraisana anjaran'ny biby isan-karazany.
Tsy afaka aleha amin'ny alàlan'ny fiara fitaterana na taxi ihany akory izany. Avy any afovoan-tanànan'i Denpasar ka mankany amin'ny valan-javaboary safalinina Bali dia somary 20 km ny halaviran-dalana, 30 minitra eo ho eo ny fitsangantsanganana. Misokatra isan'andro ity zaridaina manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 17 ity.
Ity riandrano ity dia miorina akaikin'ny farihy tendrombohitra Tamblingan, Buyan ary Bratan, any amin'ny tendrombohitra avaratry ny nosy. Tsy dia betsaka ny mpizahatany eto. Munduk dia iray amin'ireo riandrano tsara tarehy indrindra any Bali. Misongadina amin'ny haavony sy ny heriny izy, indrindra amin'ny vanim-potoana orana.
Tsy mandeha eto ny fitateram-bahoaka. Ary na ny fanakaramana taxi aza dia tsy ilaina. Tonga any Mounduk ianao, hahita taxi kely eo akaiky ny dia hiverina. Ary ny baiko miverimberina miaraka amin'ny fiandrasana mpamily fiarakaretsaka iray eo akaikin'ny riandrano dia lafo be kosa. Dia tsara kokoa ny manofa fiara na bisikileta ary avy aminy.
Ny velaran'ny tanimbary amin'ny ankapobeny dia azo antsoina hoe karatra mitsidika manokana an'i Bali. Ny tena mitsidika azy ireo dia ahitana ny velaran-tany ao amin'ny faritra Tegallalang. Ny halaviran'izy ireo avy any Ubud dia 9 km, mila mandroso mianavaratra mankany amin'ny volkano Batur ianao. Eto ianao dia afaka maka sary mahafinaritra be dia be, mandeha an-tongotra amin'ireto lalambe ireto ary misotroa kafe Luwak matsiro. Eo amin'ireo lalana ireo dia misy fantsom-pifandraisana lava be izay mihantona eo amin'ny hantsana. Afaka manantona azy ianao.
Tegallalang Terraces no misy ny afovoan'i Bali. Afaka mandeha amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fiara fitaterana manofa na taxi ianao. Amin'ny fitateram-bahoaka dia afaka mankany Ubud ihany ianao. Malalaka ny fidirana amin'ny tanimbary.
Valan-vorona sy biby mandady
Kompana tokana izy io, mizara roa - ho an'ny vorona sy ho an'ny biby mandady.
Sahabo ho 2 hektara ny velaran'ilay valan-javaboary. Izy io dia manana karazam-borona 1 000 mahery voaangona manerantany. Ao amin'ny valan-javaboary, afaka mahita vorona avy any Afrika, Amerika ary Azia atsimo atsinanana (ao anatin'izany i Indonezia). Io no vorona lehibe indrindra any Azia. Namboarina ho azy ireo ny toe-piainana voajanahary. Ny sasany amin'ireo vorona dia manidina sy mandeha manodidina ny valan-javaboary tsy misy famerana. Ny ampahany hafa dia miaina ao anaty sela, nefa ireo sela ireo dia mbola lehibe sy malalaka.
Biby goavambe, iguanas, voay, androngo, bibilava, ary koa ny tratran'ny sarina sarina dragona nivelona tamin'ny valan-javaboary.
Avy any Denpasar mankany amin'ity valan-javaboary ity 13 km. Ny dia avy eo an-tampon-tanànan'i Bali mankany amin'ny valan-javaboary sy vorona mandady dia maharitra antsasak'adiny mahery. Avy any Denpasar isaky ny adiny 2 dia miainga mankany Ubud ny bus izay mitondra anao mivantana mankany amin'ny valan-javaboary. Ny vidin'ny dia toy izany dia 80 000 ropia (5-6 $).
Ny vorona vorona sy vorona dia misokatra manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 17:30 hariva. Ny tapakila ho an'ny olon-dehibe dia mitentina 200 000 ropia ($ 14-15), ho an'ny ankizy (hatramin'ny 12 taona) - 100 000 ropia (7 $ eo ho eo). Miaraka amin'ny tapakila, ny mpitsidika tsirairay dia omena sarintany misy ny valan-javaboary. Manoro hevitra anao ny ho tonga eto aloha hisorohana ny hafanana sy ny valalabemandry. Haharitra adiny 3 farafahakeliny ny fikarohana ny valan-javaboary iray manontolo.
Hotely Bedugul Taman Rekreasi
Io trano fandraisam-bahiny io dia nanomboka natsangana tamin'ny taona 1993, ary tamin'ny 2002 dia najanon'izy ireo ny fanamboarana, nefa tsy nahavita azy. Hatramin'izao, tsy mbola misy fampahalalana azo antoka momba ny hoe iza no nitory sy mpanohana ny asa fanamboarana. Ny andiany iray dia manondro ny zanakalahin'ny filoha indoneziana teo aloha izay nisedra olana ary, vokatr'izany, niafara tany am-ponja, ny iray kosa nanondro ilay mpandraharaha mpanankarena nefa tsy mahita lavitra avy any Chine.
Nandritra ny 17 taona dia nitombo ny trano fandraisam-bahiny izay nisy zavamaniry tropikaly izay namorona ny sariny mistika ankehitriny. Ny fahasiahana sy ny fandravana no manjaka eto. Ny tany amin'ny hotely dia manome fomba fijery mahafinaritra any an-tendrombohitra.
Bedugul Taman dia any an-tendrombohitra, 4 km miala amin'ny Farihinin'i Bratan. Ny haavon'ny haavon'ny ranomasina dia 1 200 m. Ilay tranobe misy rihana dimy dia hita mazava avy amin'ny lalambe akaiky indrindra.
Afaka mitondra fotsiny ianao amin'ny alàlan'ny fiara fitaterana manofa na taxi.